imaginary clouds: အင်းလေးကန်
အင်းလေးကန်အတွင်းမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ Random photos တွေကို အင်းလေးကန် ခေါင်းစဉ် အောက်မှာတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံတွေ အားလုံးဟာ ဝါသနာအရ ထင်ရာမြင်ရာ ရိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အခုပိုစ်မှာ ပုံနှစ်ပုံတင်ထားပါတယ် ။
Posted by icn2 at 13:03
Labels: Random photos, အင်းလေး (Inle)
myitkyeenar 26 December 2011 at 14:55
တောင်ကြီးနဲ့ အင်းထဲ တည်းခိုစားရိတ် တညဘယ်လောက် ပေးရပါသလဲခင်ဗျား၊ ဒီနှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက် လေးမှာမိသားစုသွားချင်လို့ပါ။ ကလော၊ ပင်းတယ ကော မရောက်ခဲ့ဘူးလားဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
icn2 26 December 2011 at 15:31
ဟုတ်ကဲ့ ။ ကျနော်တောင်ကြီးမှာ မတည်းပါဘူး ။ အင်းထဲက ဟော်တယ်တွေက တည်းခိုခအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ။ ကျနော်သိသလောက် လူသိများတဲ့နေရာ ၊ နာမည်ကြီး နေရာတွေမှာတည်းခိုခ တစ်ညကို ၃သောင်း ၊ ၄သောင်းကနေ ၆ သောင်း ၊ တစ်သိန်းထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ် ။ ကိုယ်တည်းတဲ့အခန်းက ရေပြင်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့နေရာ ၊ ရေမမြင်ရတဲ့ နေရာ ၊ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးကွဲတယ်လို့သိရပါတယ် ။ နှစ်ယောက်ခန်း ၊ မိသားစုတွေအတွက် အခန်း စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ။တစ်ဦးတယောက် ၊ မိသားစု တစ်စုရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ်လိုက်ပြီး ကွဲတယ်လို့ကျနော်ထင်ပါတယ် ။ ကလော ၊ ပင်းတယ ကို အချိန်မရလို့ မသွားခဲ့ပါ ။
myitkyeenar 27 December 2011 at 22:31
Phyo Evergreen 29 December 2011 at 23:40
ကျွန်တော်လည်း ကလော၊ပင်းတယသိပ်မသွားဖြစ်ဘူး...။ ပင်းတယဆိုဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ မရောက်တာ..အင်လေးတော့ဆယ်နှစ်ကြာမှ တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တယ်...မရောက်ရောက်အောင်သွားတာမို့..။
icn2 30 December 2011 at 16:26
ကျနော်လည်း ကလော ၊ ပင်းတယ ဘက်ကိုသွားချင်တယ် ။ အခုသွားတုန်းက အချိန်မရတော့လို့ မဝင်ခဲ့ရတာ ။ အင်းလေးက တော့ ပထမဆုံးရောက်ဖူးတာပါ ။
Whoami774January 2012 at 22:34
Rule of third again!
icn25January 2012 at 21:07
ငါးဖယ်ချောင်းကျောင်း ( ကြောင်ခုန်ကျောင်း)
ရွှေအင်းတိန် ဘုရား- ၈
ရွှေအင်းတိန် - ၇
အင်းလေး ဘုရားဖူး နောက်ဆက်တွဲ
ရွှေအင်းတိန် ဘုရား - ၆ ( ဝါးတော )
ရွှေအင်းတိန် ဘုရား-၅ ( ငါးရက်ဈေး )
ရွှေအင်းတိန် ဘုရား - ၄
ရွှေအင်းတိန် ဘုရား-၃ ( လှေဆိပ် )
ရွှေအင်းတိန် သို့ - ၁
ညောင်ရွှေဈေး - ၂
Chinatown (Yangon) drawing
Chinatown-4 ( Yangon )
Chinatown-3 ( Yangon )
Random photos ( အင်းလေး )
Chinatown ( Yangon)
အင်းလေး အမှတ်တရ အနုပညာလက်ရာ - ၃
ဟိုဟိုဒီဒီများ ( Mark Twain )
ပန်းချီ ( အင်းလေး )
ဟိုဟိုဒီဒီများ ( Link တချို့)
ရက်ကန်း အလုပ်ရုံ -၂ ( အင်းလေး )
ရက်ကန်း အလုပ်ရုံ ( အင်းလေး )
သူတို့စာ ၊ သူတို့စကား (W.H. Auden)
အင်းလေး အမှတ်တရ အနုပညာ ၂
သူတို့စကား ( Dylan Thomas)
drawing ( အင်းလေး အမှတ်တရ အနုပညာလက်ရာ နောက်ဆက်တွဲ)...
အင်းလေး အမှတ်တရ အနုပညာလက်ရာ
မန္တလေး - ၃
ဗထူးကွင်းမြီးရှည် ( မန္တလေး )
မန္တလေး - စစ်ကိုင်း လမ်းမပေါ်
မြစ်ဆိပ်-၂ ( မန္တလေး )